Tonga tao amin'ny orinasanay ny birao siantifika sy teknolojia ao amin'ny distrikan'i Huaian mba hitarika ny asa
Jeremy Guan, tale jeneralin'ny teknikan'ny fitsaboana ASN Huaian CO., LTD dia nanome ny tompon'andraikitra ao amin'ny Biraon'ny Teknolojia Distrikan'i Huai'an izay tonga tao amin'ny orinasanay mba hanaovana famotorana sy fikarohana ary noraisina tamim-pitiavana Tamin'ny 26 Aogositra. Mihaino ireo mpitarika mifandraika amin'ny Birao Teknolojia ...
Ny fantsom-pandefasana dia misy sosona maro an'ny fiberglass manokana namboarina tamina resina.
1. Hamafin'ny haavo sy lanjany maivana: Ny hamafin'ilay vongan-javamaniry aorian'ny fanasitranana dia avo 20 heny noho ny lalotra vita amin'ny lovantsofina. Ity endri-javatra ity dia miantoka fikolokoloana azo antoka sy mafy aorian'ny famerenanana marina. Kely ny fitaovana fametahana ary maivana ny lanjany, mitovy amin'ny 1/5 amin'ny lanjany ...
Ahoana ny fampiasana kasety Casting Orthopedic
1. Amboary ny ampahany naratra ary fonosina amin'ny landy landihazo; 2. Sokafy ny kitapo fonosana kapila fanariana ary atsoboka ao anaty rano ny fehy amin'ny hafanana 20 ~ 25 ℃ mandritra ny 4 ~ 8 segondra; 3. noterena hamoaka rano, ny horonan-taratasy iray dia tsy maintsy ampiasaina hanalana ilay horonana hafa ...